Ukuphupha iLamm ▷ ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Kithina, imvana sisidalwa esinobuninzi bokuthamba. Kwelinye icala, oku kungenxa yokuba sisilwanyana esincinci, unyana wegusha, kwaye kwelinye icala, uboya baso boboya busikhumbuza isilwanyana esasifakwe.
Umhlophe woboya unika umbono wokuba umsulwa, yiyo loo nto imvana ibisisilwanyana sedini amawaka eminyaka. UYesu uyaziwa njengeMvana kaThixo ethabathela kuye izono zomntu. Imvana yePasika iza njengokroba komthendeleko okanye njengekhekhe etafileni. Sikwadibanisa imvana nokungazi kunye nokholo olulungileyo: inokuxhelwa ngaphandle kokurhanela.
Ukuba umntu uphupha itakane, mhlawumbi bafuna ukulikhathalela kwaye balikhokele njengomalusi. Elimsulwa nelithembekileyo lesilwanyana mhlawumbi livusa ithuku lokukhusela ephupheni. Ukufika kutoliko oluthembekileyo lwephupha, umntu kufuneka azame ukukhumbula iinkcukacha zephupha ngokuchanekileyo ngangokunokwenzeka. Unjani umbala wegusha? Ngaba uyayibona, ingaba iyalayishwa, iyasikwa okanye ikrazukile?
1 Uphawu lwephupha «imvana» ​​- ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «imvana» ​​- ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «imvana» ​​- ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «imvana» ​​- ukutolikwa ngokubanzi
Ekuchazeni iphupha, uphawu lwephupha "imvana" lithetha ubumnandi y Umonde, kodwa nangenxa yobuyatha kunye naivety. Kuba, njengomhlambi, itakane lilandela ezinye iigusha ngaphandle kwee-buts. Ke ukubona okanye ukukhokelela itakane ephupheni kubonisa umntu onesimilo esihle. Oko kunokuba uphupha wena okanye omnye umntu. Umntu kufuneka alwele ukuzithemba ngakumbi.
Ukuba umntu uphupha ngokuba namatakane, iphupha elo libonisa amaxesha anenzuzo kunye nokungakhathali. Ukuba uphethe isilwanyana ngengalo yakho, uphawu lwephupha luquka enye Mva njeoyisebenzisela abanye. Ukuphupha kuyabakhulula abanye kumaxhala akho, kodwa awunambulelo ngawo. Ixhwane elixhuma engceni liqulathe ukutolika kwamaphupha ulonwabo kunye novuyo, kunye nentuthuzelo ngamaxesha anzima.
Oku kubalulekile nokutolika iphupha. inkangeleko yangaphandle yesimboli yephupha. Nabani na obona imvana emhlophe ephupheni angathemba ukuba, kwimeko ethile, ubumsulwa bayo buya kungqinwa. Imvana emnyama luphawu lwabantu abafuna ukukwenzakalisa.
Ukuba itakane liyaqhwalela, oko kuthetha ukuba iphupha elo liya kufumana indlela elungileyo. Nabani na obona igusha elahlekileyo ephupheni sele efumene oko bebekhangela ebomini bokwenyani. Ukukhala kwegusha esencinci kuthetha ukutolikwa kwamaphupha umntu afuna ukujongana nesisa sephupha. Kufuneka uqaphele ukuba ungazisebenzisi.
Kwisikere sesikhumba setakane, ukubala okubandayo kunokubonakaliswa ekuchazeni amaphupha, lonke ulusu lufanekisela intuthuzelo kunye nolonwabo ngokudibanisa abanye. i ubumsulwa Uphawu lwephupha ludlala indima ekhethekileyo ukuba umntu uphupha izinja okanye iingcuka ziqhatha imvana, okanye ukuba ubona uboya bayo budyobhekile ligazi ephupheni: abantu abamsulwa kuya kufuneka babandezeleke kukuziphatha okungalunganga kunye nezenzo ezimbi zabanye.
Uphawu lwephupha «imvana» ​​- ukutolikwa kwengqondo
Ekuchazeni iphupha, uphawu lwephupha "imvana" luphawu lobuntu bephupha. Njengesilwanyana, siyinyani, siyalungiswa, kwaye kulula ukuba nefuthe. Izinto eziluncedo njengokuthamba kunye nomonde zinokuguqula ubuthongo bube sengozini: mhlawumbi phatha y ukuxhaphaza.
Iphupha sisilumkiso kwi-subconscious ukuba imele iimfuno zayo ngakumbi kwaye inyanzelise rhoqo ngokuchasene nezinye zangoku. Enye inkalo yokutolikwa kwephupha lolu phawu luphupha loloyiko olucinezelweyo lwesoyikiso ngesiquphe okanye esingezantsi. Imvana yile Idini lesilwanyana Ukugqwesa kunye nokubonakalisa uloyiko lokuphupha ngokungakwazi ukuzikhusela ngokwaneleyo kwaye ke ube lixhoba ngokwakhe.
Imvana eleleyo ephupheni iveza uloyiko kunye noxinzelelo. Ngokunokwenzeka, ngamanye amaxesha ukuphupha uziva ungazi nto ukuba awunakuzinceda, njengomntu ozinikela njengemvana kwisiphelo sakhe endaweni yokuyithathela ezandleni zakhe.
Uphawu lwephupha «imvana» ​​- ukutolika kokomoya
Njengesilwanyana somhlambi esidinga ukukhuselwa, itakane ngumqondiso wephupha lokutolikwa kwephupha. Ulungelelwaniso y Umngcipheko yokuphupha. Inxalenye yokomoya ekungabinako ukunceda ilandela uninzi lwabanye.
Ukongeza, imvana ephupheni ikwabonisa umnqweno wangaphakathi woxolo, Imvisiswano nothando.